Iwo ekutanga mamaboards eiyo iPhone 7 anotanga kuoneka | IPhone nhau
Nguva imwe neimwe pavanotisiya zvishoma kumafungidziro, nguva dzinoenda apo Apple yaichengeta zvigadzirwa zvayo chakavanzika chesimbi. Kugadzirwa kwemisa muChina kuri kuita kuti chiitiko ichi chiwedzere kuoma, kunyanya sezvo chero munhu anga aine mudziyo uripo unogona kuita pachena kuruzhinji mune maminetsi mashoma. Mune ino kesi ekutanga mamaboards eiyo iPhone 7 anotanga kuoneka, hongu, kunyangwe pasina zvemukati zvinhu zvinoita kuti tijekese huwandu hwe RAM kana saizi yevagadziri. Isu tinowana iwo asina chinhu wedunhu mabhodhi, akagadzirira kuunganidzwa.
Zvakare vakaonekwa mukati Weibo, nguva ino neruoko rwe Geekbar, zvinofungidzirwa. Aya mabhodhi, sekutaura kwatamboita, haasanganisi chero chinhu kana chip, iwo ndiwo musimboti uyo ruzivo rwunotenderera pakati pezvinhu zvakasiyana zvichazounganidzwa. SZvichienderana nesaizi yezvinhu izvi, iyo iPhone 7 uye mahwendefa ayo anofanirwa kunge akafanana neiyo iPhone 6s .
Kubva pane izvo zvatinoona, iyo kamera ichave ine Mheni yekubatanidza, asi hapana chiratidzo che3,5mm jack iyo yatinogona kutofunga kunge yakafa. Zvichakadaro, tinoramba tichifunga izvo Apple iri kusiya "zvinhu zvakanaka" zveyegumi yegumi yemakore kufumura yekutanga kwayo. Hatina kuzoshamiswa zvachose kana iyi iPhone nyowani isina kana kunzi iyo iPhone 7, asi asi imwe vhezheni yeiyo iPhone SE. Ticharamba tichikuzivisa iwe senguva dzose, yenyaya dzese kubva ku iPhone nyika uye Apple mune zvese, kuitira kuti iwe uzive zvicha zounzwa munenge mwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iwo ekutanga mamaboards eiyo iPhone 7 anotanga kuoneka
Rondedzero yetweaks inoenderana neIOS 9.2-9.3.3 (III)